Henjana ny fanambaran’ny Fivondronamben’ny eveka : fitondrana tsy mahomby, mpanao fampanantenana poakaty… | NewsMada
Nivory maika, tsy ara-potoana ny eo anivon’ny fivondronamben’ny eveka tamin’ity herinandro ity. Anisan’ny nivoitra tamin’ny fehinkevitra ny raharaham-pirenena. Mazava ny hafatra. « Fitondrana tsy mahomby… mpanao fampanantanana poakaty… », hoy ny mpitondra teny, Mgr Rabemahafaly Fulgence
Nanombohan’ny eveka ny hafatra ny filazana ny andininy ao amin’ny Soratra Masina fa toy ny ondry tsy misy mpiandry ny vahoaka malagasy. Nohitsin’izy ireo fa fitondrana tsy nahay naka lesona ireo mpitondra nifanesy ka nahatonga izao fahavoazana izao. « Misarika ny saintsika, tsy hanadino ny tantara amin’izao faha-56 taon’ny Fahaleovantena izao… Indrisy anefa fa misy aizina mandrakotra. Marary i Madagasikara. Misy miteny hoe efa miala aina, milentika ny firenena ; miraviravy tanana ny mpitondra, fitondrana tsy mahomby, miharo lainga ; mpanao fampanantenana poakaty… », hoy ny eveka. Nohitsin’izy ireo fa mahazo vahana ny herisetra, tsy voahaja ny hasina maha olona, tsy voatsinjo ny madinika, goragora ny fiarahamonina. Nametra-panontaniana ny eveka. « Aiza ny sori-dalana mazava ho an’ny fanabeazana. Mifampiahiahy ny mpiara-monina ; potika ny soatoavina , mifanjevo ny ara-pinoana… Hararaotina hanaovana kabary politika ny fivahanana. Jereo ny halatra lakolosy arahina fandrahonana. Iza no ao ambadika ? » hoy ihany izy ireo.
Fanodinkodinam-bola… Mihanaka ny baranahiny
Nanterin’ny eveka fa mikorontana ny fitantana ara-politika sy toekarena ary tsy manao ny asany ny mpanara-maso manoloana ny fanodinkodinam-bola ka mihanaka tanteraka ny baranahiny, araka ny hafatra ihany. « Tsy misy sori-dalana mazava. Tsy voafehy ny fitrandrahana ny harem-pirenena hitsinjovana ny soa iombonana. Mikororosy fahana ny sosialy ary tsy mandry fahalemana ny tany. Mamatotra tanteraka ny kolikoly nefa misy ny tsimatimanota amin’ireo tompon’andraikitra sy ny manodidina, tsy voatsinjo ny zo aman-kasin’ny vahoaka madinika. Tafahoatra ny fitiavam-bola. Lasa fanjakan’i Baroa ny eto amintsika ary leo ny vahoaka », hoy izy ireo.
Voatsikera koa ny mpanohitra
Nahazo ny anjarany koa anefa ireo mitonona ho mpanohitra ka nilazan’ny eveka fa maro ireo mila fanovana. Miforona ireo vondrona antoko sy sendikà na koa fiarahamonim-pirenena ka mitondra vahaolana amin’ny Tetezamita vaovao. « Izany ve ny vahaolana ? Misy ireo mampiasa ny hafatry ny eglizy hanamarinana ny teniny. Aoka tsy hanararaotra. Raha jerena, fitadiavana fahefana sy hitadiavana seza sy vola. Matetika ireo teo aloha ihany no miverina nefa tsy mahavita na inona na inona. Tsy vitan’ny kobaka am-bava fa mila fiovan’ny toe-tsaina entanin’ny fitiavan-tanindrazana », hoy ny eveka.
Manoloana izany, nanolotra vahaolana maharitra ny fiangonana ka nilaza fanompoana firenena sy ny vahoaka ny fahefana. Ilaina ny fiaraha-miasa amin’ny fiangonana. Ampiana sy beazina ny olom- pirenena hiana ny hasina maha olona sy ny soa ho an’ny daholobe. Tsinjovina ny tanora ary ampandraisana andraikitra. « Mitaky ny fijoroana olom-baovao hampisy risi-po ny maro izany… Hajaina ny lalàna velona ; hapetraka ny fanaraha-maso, hampandeha ny fiainam-pirenena, tsy hirona amin’ny faharavana… Ampirisihana ny vahoaka tsy hiraviravy tanana fa hiray hina ary tsy hatao fitaovana hahazoana fahefana », hoy ihany izy ireo.